Ny boky 10 tsara indrindra momba ny mermaids | tantara foronina - World Book
Ny boky 10 tsara indrindra momba ny mermaids | tantara foronina
5 Oktobra, 2021 Desambra 9, 2020 ny worldbook
Aiza no hividianana ilay boky Ny Mermaid Black Conch?
Ny Mermaid of Black Conch: Tantaram-pitiavana: Boky Costa an'ny taona 2020
Ny tantara momba ny mermaids dia nipoitra avy amin'ny tsy fahatsiarovan-tenantsika iombonana, an'arivony taona izy ireo ary hita eran-tany. Tsy toy ny sarimihetsika Disney mahafatifaty momba an'i Ariel amin'ny bikini sy volo mena, ireo angano sy angano ireo dia tena maizina.
Maro ny zavatra iraisan'izy ireo: Matetika ny zazavavindrano no voaozona na afaka manozona sy mitaona ny hafa (tantsambo, andriana, piraty) ho any amin'ny toerana halehany. Mihira matetika ny mermaids ary manana feo malefaka na talenta mampitsiriritra izay mampialona ny vehivavy hafa.
Ny tantarako Ny Mermaid Black Conch ahitana ny sasany amin'ireo archetypes ireo. Ozonin'ny vehivavy hafa ny mpilalao fototra ary eny, manana feo mihira mamy izy. Saingy ny boky dia famerenan'ny vehivavy ny angano Taino fahiny.
Aycayia, tovovavy vazimba teratany, dia tratran'ny Amerikana tamin'ny fifaninanana jono, voavonjy, ary tamin'ny farany dia nandresy ny ozonany tamin'ny fitakiana ny fombam-pivavahana vetaveta nataony. Ovainy koa izay sendra azy. Ireto ny sasany amin'ireo boky mermaid izay nankafiziko sy nankafiziko teo am-panoratana ny tantarako manokana.
1. Mermaid Elia nataon'i Essie Fox
Elijah's Mermaid (Edisiona anglisy)
Mistery gothic momba ny tovovavy iray antsoina hoe Pearl nobeazina tao amin'ny trano fivarotan-tena iray antsoina hoe Ny tranon'ny mermaids. Pearl manana deformation kely. Fa angaha moa mermaid? Tsy maintsy mamaky hatrany ianao. Tantaran'ny Victoriana manafintohina ity izay mikasika ny lohahevitra momba ny firaisana ara-nofo, ny pôrnôgrafia ary ny fanararaotana ankizy.
Voasarika be dia be izy io, miaraka amin'ny fikasihana mahafaty. Fox dia mpanoratra tantara foronina tena tsara. Ny endrika nentim-paharazana ny zazavavindrano (tsy afa-manoatra, shapeshifter, sirena, adala) tonga velona eo an-tananao.
2. Ny lalina nataon’i Reniranon’i Solomona
The Deep (Edisiona anglisy)
Tantara fohy mifototra amin'ny hiran'ny rap mitovy anarana, dia dikan-teny afrikanina amin'ny mermaid mitovy anarana. ny vehivavy bevohoka natsipy an-dranomasina nandritra ny Afovoany Pass dia niteraka tany amin'ny halalin'ny ranomasina ary ny taranany dia miaina soa aman-tsara any amin’ny fiaraha-monina ambanin’ny ranomasina.
I Yetu ihany, mpahay tantara, no mamonjy ny fahatsiarovana mangirifiry ny olony ary milomano eny ambonin'ny tany mba hanangona azy ireo. Rehefa tafaverina teto an-tany izy dia miatrika fahamarinana mahatsiravina: Ny lasa tamin'ny olony. Ity boky ity vao haingana no nahazo a Loka Literatiora Lambda ary efa mahazatra amin'ny tantara noforonina Afrikana-Amerikana ankehitriny.
3. Ondine avy amin'i Friedrich de la Motte Fouqué
Tantara alemà tamin'ny taonjato faha-XNUMX mifototra amin'ny angano frantsay momba ny Melusine, tovovavy ony antsasaky ny menarana fa manambady andriana frantsay izy amin'ny fepetra tsy mijery azy mihitsy raha mbola ao anaty efitra fandroana.
Undine, nosoratan'ny andriana frantsay, dia namorona tantara hafa; eto, ny mahery fo dia manambady knight ary taty aoriana vao nanambara fa tsy olombelona tanteraka izy. Taty aoriana dia raiki-pitia tamin'ny vehivavy hafa izy, ary i Misty dia nanasazy ny tsy fivadihany tamin'ny oroka izay nahafaty azy.
4. Pisces: tantara nosoratan'i Melissa Broder
Ny Pisces: Novel
Vitsy ny tantaran'ny mermaid amin'izao fotoana izao amin'ny literatiora amerikana. Be loatra Disney sy Tom Hanks tamin'ny fifangaroana sy taloha dia nanitatra ny karazana maizina kokoa izy ireo. Tena tiako ity boky ity, indrindra fa lehilahy ny tena tantsambo.
Tantaram-pitiavana sy tantara mahatsikaiky izany, eo anelanelan'i Lucy tia an'i Lucy sy ilay Theo tsara tarehy, tsara tarehy, izay "manomboka eo ambanin'ny akohony ny akoho." Lucy, sitrana tamin'ny fisarahana, mipetraka any Venice Beach, Kalifornia, ary manandrana mamerina ny fiainany ao amin'ny Tinder Abyss. Raha ny marina, ity dia tantara mahasorena tamin'ny taonjato faha-XNUMX; vakio ho an'ny firaisana ara-nofo maloto.
5. The Mermaid and Mrs. Hancock by Imogen Hermes Gower
Ny Mermaid sy Ramatoa Hancock: ny Sunday Times ambony indrindra amin'ny tantara foronina tena lafo indrindra
Nosoratan'ny mpanoratra sangany eran-tany, ity no tena mistery momba ny zazavavindrano: ny zavaboary hybrid nosamborina ary miaina fiainana melancholic Toy ny zavatra tian'ny lehilahy
Tantaram-pitiavana, tantara trondro, ary tantara ara-tantara mampientam-po natambatra ho iray, napetraka tany Georgian Angletera.
Vidio amin'ny fiteny sy famaritana mahafinaritra momba ilay vehivavy mpanjono tra-doza indroa. Angamba ny boky tiako indrindra ao amin'ny lisitra.
6. The Lady of the Sea nataon'i HG Wells
A Dama do Mar (Edisiona portogey)
Iray amin'ireo tantara nosoratan'i Wells tsy dia fantatra loatra izy io, saingy iray amin'ireo tsara indrindra. Ny tantaram-pitiavana mahafinaritra, toy ny angano mermaid maro, izay ny tovovavy Doris Thalassia Waters, zanakavavin'ny tany, manana teti-dratsy amin'ny lehilahy marary efa fofombadin'olon-kafa.
Tsy nahasakana azy izany ary rehefa resy i Chatteris dia voaheloka izy ary maty. Satiora ara-tsosialy ihany koa, Ny Sea Lady mikaroka lohahevitra matotra momba ny natiora, firaisana ara-nofo, fantasy ary ny idealy amin'ny tontolo iray Edwardian izay mampitony ny famerana ara-moraly. Eto, ny mermaid dia mamitaka sy iraka.
Ny antsipirian'ilay zazavavindrano miala sasatra ao amin'ny zaridainany avy amin'i Canute Caliste. Sary: Canute Caliste / GNN Library
7. The Mermaid Wakes nataon'i Canute Caliste sy Lola Berg
Mifoha ny mermaid
Nianiana i Caliste, mpanakanto avy ao amin'ny nosy Carriacou any Karaiba, fa nahita zazavavindrano ary nandoko azy ireny matetika. Ity boky misy sary ity dia fikarohana tena ilaina ho an'ny tantarako. Ny zavakanto mermaid dia manerana an'i Karaiba, fa ny mermaid an'i Caliste angamba no malaza indrindra.
Fanangonana ny 22 sary hoso-doko ny zazavavindranoMisy ihany koa ny tantaran'ny mermaid, nataon'i Berg, izay tsy maintsy ho an'izay liana amin'ny zavakanto Karaiba sy ny fomban-drazana mermaid.
8. The Little Mermaid nataon'i Hans Christian Andersen
Ny Mermaid Kely, fanangonana boky misy sary
Ity angano danoà maizina be ity dia noravan'i Disney. Ao amin'ny tany am-boalohany, ny tanora mermaid raiki-pitia amin'ny andriana izay mamonjy amin'ny sambo rendrika. Nanantena ny hihaona taminy teny an-tanety izy, nanao fifanarahana tamin'ilay mpamosavy an-dranomasina ary nanaiky ny hanapaka ny lelany ary hanome ny feony ilay mpamosavy ho takalon'ny tongotr'olombelona.
Mazava ho azy fa fifanarahana ratsy izany. Nalainy ny tongony, nifanena tamin’ny andriana izy, saingy tsy afaka niteny izy ka izay no mahatonga ny andriana hitondra azy toy ny biby adala. Amin'ny farany dia manambady olon-kafa izy. Nivadika ho elf an-habakabaka ilay zazavavindrano kely. Tantara hafahafa izany, izay ny moraly Mijanòna ho ianao ihany.
9. Ny Volana sy ny Masoandro nataon'i Vonda N McIntyre
Ny volana sy ny masoandro
Tamin'ny 1997, ity tantara foronina siantifika ity dia nandresy Lalao amin'ny seza fiandrianana amin'ny loka Nebula. Nanomboka teo dia natao sarimihetsika (toy ny zanakavavin'ny mpanjaka). Tany Frantsa tamin'ny taonjato faha-XNUMX, teo amin'ny lapan'ny Mpanjakan'ny Masoandro, dia voasambotra ny 'monin'ny ranomasina' izay hita fa vehivavy, ary olona manan-tsaina sy saro-pady ihany koa.
Hitantsika indray ny feminisma ao amin'ny tantaran'ny mermaid, rehefa mitambatra ny lehilahy mba hitazona na hihinana azy, ary miezaka ny hanafaka azy ny vehivavy. Farany, dia navotsotra ary mampiseho ny namany olombelona izay iafenan'ny harena be rendrika.
10. Ingo nataon'i Helen Dunmore
Nentanin'ny mermaid ny Zennor avy any Cornwall, ity no voalohany amin’ireo andian-boky ho an’ny tanora efatra. Ingo dia tontolo anaty rano ary Sapphire, izay misy tovovavy iray nanjavona tamin'ny fomba mistery ny rainy, dia voasarika tamin'ny lehilahy mirehareha antsoina hoe Faro.
Nasehon'i Faro azy ny tanànany ambanin'ny rano sy ny mponina ao ary mianatra miaina anaty rano izy. Rehefa tafaverina izy, dia tsy nijanona nandritra ny roa andro, nefa mbola nangetaheta sira ihany izy ka nandre ny ranomasina niantso azy tamin’ny anarany. Taty aoriana, izy sy ny namany Conor dia nanakana ny mpilomano sasany tsy hanakaiky loatra ny fasana masina.
Ny Mermaid Black Conch nataon'i Monique Roffey (Peepal Tree Press) dia voatendry ho amin'ny loka Costa ho an'ny Novel of the Year, izay hambara amin'ny 4 Janoary. Raha te hanafatra dika mitovy amin'ny boky dia mandehana ao amin'ny guardianbookshop.com.
Sokajy Vaovao farany Tags Fiction, boky, ny, tsara indrindra, mermaids, amin'ny Ticket navigation
Ny Fitiavan'i Eileen Alexander ao amin'ny Blitz Review - Romance and Bombshells | Autobiography sy fahatsiarovana
Na i Keanu Reeves aza dia manao izany: Nahoana no mandeha any Kickstarter ny tantara an-tsary? | Saripika sy tantara an-tsary
Ny Hevi-dehibe: Nahoana isika no tsy tokony hiakatra | boky ara-politika
tononkalo amin'ny herinandro: gliders mihantona miaraka amin'ny saxophone nataon'i Ian Pople | Tononkalo
Rosemary Tonks' The Bloater Review: Vatosoa tamin'ny taona 1960 no avotra tamin'ny haizina | Fiction
The Prince Rupert Hotel for the Homeless by Christina Lamb review – fandriana, sakafo maraina ary fanajana | boky fiaraha-monina